Ole Gunnar Solskjaer Oo Ka Jawaabay Eedeynta Rio Ferdinand Ee Ronaldo Inuu Qabtay Shaqadiisa Tabaranimo
HomeWararka CiyaarahaOle Gunnar Solskjaer oo ka Jawaabay Eedeynta Rio Ferdinand ee Ronaldo inuu qabtay Shaqadiisa Tabaranimo
Ole Gunnar Solskjaer ayaa weerar ku qaaday saaxiibkiisii ​​hore Rio Ferdinand isagoo ku taliyay in Cristiano Ronaldo uu isku dayay inuu qabto shaqada tababaraha intii lagu guda jiray guuldaradii Champions League ee Young Boys Talaadadii.
Ferdinand ayaa sheegay inuu ku amri lahaa Ronaldo inuu fadhiisto ka dib markii uu sheegay in superstar-ka 36 jirka ah uu ka soo qaatay “tilmaamaha” aagga farsamada ka dib markii lagu beddelay guuldaradii 2-1.
Laakiin Solskjaer ayaa dib u weeraray isaga oo sheegay in Ferdinand uu xaqiiqooyinkiisa khaldamay isla markaana uu ku adkeysanayo in Ronaldo uusan shaqo ku laheyn Old Trafford. Ronaldo ayaa dhaliyay 3 gool labadii kulan ee ilaa iyo haatan la ciyaaray wuxuuna maanta London Stadium ku wajahayaa West Ham.
“Rio, mar kale, mararka qaar wuxuu ka hadlaa waxyaabo uusan si dhab ah u aqoon,” ayuu Solskjaer ka yiri khabiirka TV -ga. Waxana uu hadalkiisa ku soo afjaray in waxba aysan ka jirin hadaladiisa.